सुन तस्करी काण्डमा कसरी जोगिए भण्डारीका साझेदार श्रेष्ठ ? | Citizen Post News
सुन तस्करी काण्डमा कसरी जोगिए भण्डारीका साझेदार श्रेष्ठ ?
२०७५ असार २६ गते १०:५९
काठमाडौं । ३३ किलो सुनकाण्डमा चर्चित बाजेका सेकुवाका सञ्चालक चेतन भण्डारी अहिले फरार छन् । अमेरिकाबाट नेपाल आउँने दिन नै उनको नाम सार्बजनिक भएपछि उनी अमेरिकामै लुकेर बसेको अनुमान छानबिन समितिको छ । तर यहि चर्चित ३३ किलो काण्डमा युवा व्यापारी तथा भण्डारीका बिजनेश पार्टनर अमित श्रेष्ठ भने जोगिएका छन् ।
‘बिशाल सिमेन्टका मालिक समेत रहेका श्रेष्ठ भण्डारीका खास बिजेनस पार्टनर हुन् । कानुनीरुपमा सुन तस्करी काण्डमा उनको संलग्नता नदेखिएता पनि मौखिक सहमति र विविध काजगी प्रमाणका आधारमा यी दुईले सुन तस्करीमा लगानी गर्दै आएका थिए,’ जानकारहरुको दावी छ । आज प्रकाशित जनप्रहार लेख्छ,‘लामो समयदेखि यी दुईको लगानी व्यापार चल्दै आएको थियो । हाईड्रो पावर र केबलकारमा समेत भण्डारी र श्रेष्ठको साझेदारी छ । दोलखाको निर्माणधिन कालिञ्चोक केबलकारमा यी दुवै लगानीकर्ता हुन् । ३३ किलो सुनकाण्डमा भण्डारी मुछिए तर श्रेष्ठ कसरी जोगिए भन्ने कुराले बजारमा ठूलो चर्चा पाएको छ ।’
गौशालको पशुपति भिजनमा कार्यालय राखेका श्रेष्ठ सानो उमेरमा ठूलो फड्को मार्ने व्यापारीका रुपमा चिनिन्छन् । ठूलै रकमको चलखेलपछि श्रेष्ठ जोगिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । रुपन्देहीको मैनहिया गाविसमा रहेको विशाल सिमेन्ट इण्डष्ट्रिजका मालिकसमेत रहेका श्रेष्ठले उत्पादन गरेको विशाल ओपीसी सिमेन्ट गुणस्तरहिन भएको खबर यसअघि नै विभिन्न सञ्चार माध्याममार्फत सार्वजनिक भइसकेका छन् ।
गुणस्तरहिन काम गरेर कमाएको रकम तस्करीमा लगानीः
अकुत सम्पत्ति थुपारेका श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायलाई प्रभावमा पारी कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको आरोप छ । ढलान र बीममा प्रयोग गरिएको सिमेन्ट सेट नभएपछि उपभोक्ता आफैंले डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलको ल्याबमा परिक्षण गराउँदा सिमेन्ट गुणस्तरहिन भएको प्रमाणित भएको थियो । सडकको ल्याबमा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको रिपोर्टमा उद्योगद्वारा उत्पादित विशाल ओपीसी ब्राण्डको सिमेन्टमा भारवहन क्षमता नभएको उल्लेख छ । उक्त रिपोर्टमा विशाल ओपीसी सिमेन्टको भारबहन क्षमता प्रति ३ दिनमा १०, प्रति ७ दिनमा १४ दशमलव ६७ र प्रति २८ दिनमा १५ दशमल शुन्य १ रहेको उल्लेख छ ।
जबकि नेपाल गुणस्तर चिन्ह ३८५ अनुसार कुनै पनि ओपीसी सिमेन्टको न्युनतम भारबहन क्षमताप्रति ३ दिनमा १६, प्रति ७ दिनमा २२ र प्रति २८ दिनमा ३३ अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । तर, विशाल ओपीसी सिमेन्टले गुणस्तरको यो मापदण्डलाई पुरा नगरेको पाइएको हो । उद्योगलाई कारबाहीको माग गर्दै गत बर्ष साउन २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीमा उजुरी समेत दर्ता भएको थियो । जिल्ला प्रशासनले भने अहिलेसम्म यसको छानबिन अगाडी बढाएको छैन् । विशाल सिमेन्टले ओपीसी र पीपीसीमा बिशाल, रत्ना र असोका ब्राण्ड उत्पादन गर्दै आएको छ ।